[Vc_row] [vc_kolomu] [vc_column_text]I-Tenerife isiqhingi esenziwe ngentaba-mlilo olwandle lwe-Atlantic olungowe-Autonomous Community of Canary Island (Spain) kanye ne-European Union. Ihlala endaweni ecishe ibe ngu-2000 sq km. futhi inesibalo sabantu abacishe babe ngama-900.000 abantu. I-Tenerife iyindawo ethandwa izivakashi futhi ithola izivakashi ezingaba ngu-6.000.000 ngonyaka.
I-Tenerife idume ngokuthi "isiqhingi sentwasahlobo yaphakade". Isimo sezulu sayo esithambile sakhiwa umoya wokuhweba, imijikelezo kanye nezintaba ezihlukanisa lesi siqhingi ezindaweni ezahlukahlukene zezulu. Isikhathi sokubhukuda eTenerife unyaka wonke futhi izinga lokushisa elijwayelekile lingama-21C.
Lesi siqhingi sinezingqalasizinda ezithuthukiswe kahle: izikhungo zezindiza ezimbili zanamuhla, amachweba amabili amakhulu nama-marin amaningi, imigwaqo emikhulu enejubane elingu-120 km / h ngesivinini, amapaki ezwe, izibhedlela, izikole njll. Iziqhingi zaseCanary zixhumene kahle yimizila yezindiza kanye nezindiza zasendaweni futhi kukhona amakhulu izindiza zansuku zonke zamazwe onke eziya kuwo wonke amazwe aseYurophu ezenziwa yizinkampani zezindiza eziningana zedolobha
I-Tenerife ine-ecology ephelele njengoba kungekho mkhakha osindayo noma amafektri amakhulu. Kuhlala kunomoya omusha ojikelezayo ovela olwandle ngenxa yemimoya yokuhweba.
Izinga lobugebengu liphansi kakhulu kanti jikelele isiqhingi siphephile kakhulu futhi siphephile.
ICanary Islands neTenerife indawo eseningizimu ye-European Union nendawo efudumele kunazo zonke eYurophu ngesikhathi sasebusika. [/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]
© 2020 ATLAS Tenerife® Real Estate, Wonke Amalungelo Agodliwe. Back to top